တရုတ်အရည်အသွေးမြင့် 18650 ဘက်ထရီ Holder အပြိုင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
E-mail ကို:[email protected]
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဘက်ထရီလက်ကိုင် > ၁၈၆၅၀ စီးရီး
ဘက်ထရီလက်ကိုင် Aa 3
AA ဘက်ထရီ Case Holder
18650 ဘက်ထရီ Holder စင်ပြိုင်
၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်အပြိုင်သည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤ ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်မျဉ်းပြိုင်သည် ၃.၇V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူအားထုတ်ကုန်အပြိုင်မိတ်ဆက်ခြင်း ၁
ဤ ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် ၃.၇ V ဘက်ထရီလေးလုံးကိုဆန့်ကျင်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီသည် ၃.၇ V ဗို့အားထုတ်ပေးနိုင်ပြီး laptop ကိုမီတာ၊ ကြိုးမဲ့ walkie-walkie၊ စတီရီယိုအသုံးအဆောင်များ၊ မော်ဒယ်လေယာဉ်ပျံ၊ ကစားစရာများ၊ ဗီဒီယိုကင်မရာစသည်ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းပစ္စည်းများ၊ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ၁၀၀% ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်။
၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူ ၂ ဦး ၏ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် (သတ်မှတ်ချက်)
ထုတ်ကုန်အမည် 18650 ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ
ပစ္စည်း: ABS အစေး
ဆဲလ်အရေအတွက် ဆဲလ် ၄ ခု
ဆိပ်ကမ်း ရှန်ကျန်း၊ ကွမ်ကျိုး
၁. ဤ ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူအား ၃.၇V ဘက်ထရီအထွက်သို့ထုတ်ပေးနိုင်သည်
အီလက်ထရောနစ် DIY အတွက် 3. ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်
4. 3.7V ဘက်ထရီလေးလုံးကိုင်ထားသည်။
၅။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူ။ သုံးရအဆင်ပြေသည်။
လက်တော့၊ မီတာတိုင်းတာမှု၊ ကြိုးမဲ့ walkie-walkie၊ စတီရီယိုအသုံးအဆောင်များ၊ မော်ဒယ်လေယာဉ်ပျံ၊ ကစားစရာများ၊ ဗီဒီယိုကင်မရာစသည်တို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်
၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအပြိုင်၏ ၄ င်းကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: Cylindrical ပလပ်စတစ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ
မူရင်းနေရာ: Dongguan, China
ပစ္စည်း: ABS Resin
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအပြိုင်
ပုံစံ: လက်ကိုင် (ဖွင့်)
Mounting အမျိုးအစား: စိတ်ကြိုက်
လည်ပတ်အပူချိန်: -10-100â„ ƒ
ရပ်စဲပုံစံ - ပင်နံပါတ်
၅။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအပြိုင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ 18650 ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအားလုံးသည် ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။
၆။ ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအားအပြိုင်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း
၁။ စံ: PE အိတ်ဖြင့်အတွင်းထုပ်ပိုးခြင်း၊ စက္ဏူထူနှင့်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်း
၂။ စိတ်ကြိုက် LOGO ဒီဇိုင်းအထုပ်၊ သင်၏ဒီဇိုင်းပုံဆွဲခြင်းကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။
၇။ ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူအားအပြိုင်အဆိုင်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
â 'မင်းကထုတ်လုပ်သူလား၊ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသောအပြိုင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင်အနှစ် ၂၀၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်း ၁၀၀ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံ ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီပိုင်ရှင်အပြိုင်အတွက်အခမဲ့နမူနာများရနိုင်ပြီးကုန်တင်ခအတွက်သာပေးချေပါ။
ငါတို့သည်သင် Express (FEDEX/DHL/UPS) ကိုအနိမ့်ဆုံးလျှော့စျေးပေးနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ Express account နဲ့ငါတို့ကိုမင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
မင်းတရားဝင် order တင်တဲ့အခါငါတို့နမူနာအခကြေးငွေတွေကိုငါတို့ပြန်ပေးလိမ့်မယ်။
products“ your မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအာမခံပေးနိုင်လား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပစ္စည်းအားလုံးအပေါ် ၁၀၀% ကျေနပ်မှုအာမခံချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်တိုးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေး (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
£“ £ငါကလက်ကားရောင်းသူတစ်ယောက်ပါ၊ အော်ဒါနည်းနည်းရနိုင်မလား။
"ငါ Quotation တစ်ခုရချင်ရင်ငါဘယ်အချက်အလက်တွေကိုမင်းကိုအသိပေးရမလဲ။
a ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်းနံပါတ် (သို့) ပုံ (သို့) ပုံဆွဲပါ
ဂ။ မှာယူမှုနှုန်းနှင့် ၀ ယ်ယူမှုနှုန်း
hot Tags:: ၁၈၆၅၀ ဘက်ထရီသိုလှောင်စင်ပြိုင်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်သူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သူ CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်
Battery Holder ၁၈၆၅၀
တစ်ခုတည်း 18650 ဘက်ထရီ Holder
ဝါယာကြိုးနှင့်အတူ 18650 ဘက်ထရီ Holder
PCB Mount နှင့် Li-ion 18650 Battery Holder
PC Pins များနှင့် Li-ion 18650 ဘက်ထရီ Holder
လိပ်စာ: အမှတ် ၉၊ Shangsha Rongfeng လမ်း၊ ChangAn Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၊ ဆဲလ်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၊ ဘက်ထရီလျှပ်ကူးခြင်းနှင့်အခြားဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားမက်ဆေ့ခ်ျများချန်ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းအကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
မူပိုင်ခွင့်© ၂၀၂၁ DongGuan KeYu Plastic Hardware Co. , Ltd All Rights Reserved